Na February 2019, Maazị Lin Yuanzhong, onye bụbu onye ọrụ Changheng Company, ọ dị nwute na ọ na-arịa kansa kansa. Onye isi ụlọ ọrụ ahụ gwara ndị ọrụ niile nọ na WeChat ụlọ ọrụ ahụ wee nye onyinye ozugbo enwere ike. Ndị ọrụ ahụ sonyekwara na onyinye na ...
CORBITION ụlọ ọrụ e ọdịda nke aha pụtara ìhè tax ugwo enterprise na Shanghai. Nke a bụ nkwenye nke teknụzụ CORBITION, kamakwa ịlaghachi ndị ọrụ niile CORBITION na ọha mmadụ. N'oge gara aga 8th China (Shanghai) International Technology Import na Export Fair, anyị na ngwaahịa ...
CORBITION Afọ Ọhụrụ
Na Ememe Oge opupu ihe ubi nke 2020, iji lụso COVID-2019 ọgụ, Companylọ ọrụ CORBITION natara ntuziaka sitere na gọọmentị dị mkpa iji hazie mbido mmepụta n'oge. Na enweghị ihe onwunwe na ike mmadụ, Maazị Ge Bingda, onye isi oche nke ụlọ ọrụ ahụ, rụrụ ọrụ ụbọchị ...